Uma ufuna izindlela kulesetayelekile izinga likashukela egazini ukushayela ngesilinganiso carbohydrate umzimba izinto emzimbeni, banake "Olidzhim" izidakamizwa. Izimpendulo ngaye, izimfanelo imikhiqizo, izinkomba kanye contraindications ukusetshenziswa, kanye neminye imininingwane ezithakazelisayo futhi ewusizo okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Ulwazi mayelana nomkhiqizi izidakamizwa, ukwakheka, ifomu ukukhululwa
Tablets "Olidzhim" kwenza inkampani waseRussia "Evalar." Ababona ikhambi, futhi ibhekwa wezokudla, ukuze ukwazi ukuthenga kubo ekhawunteni ngaphandle udokotela. Bud izinto ephilayo inulin kanye akhiphe Gymnema. Eyokuqala unekhono esikhundleni glucose ne-carbohydrate umzimba kusiza ukunciphisa amazinga kashukela egazini, kanti eyesibili - a akhiphe isitshalo ukuthi kunciphisa ushukela izifiso futhi usiza amaseli kwamanyikwe ukuze siphinde sithole ngokushesha. Phakathi kwezinye izinto, Gymnema akhiphe kusiza umzimba ekuthuthukiseni insulin lalo. Iyatholakala kusho ngesimo amaphilisi, e abangu-izingcezu 100 0,52 amagremu. Intengo zomuthi iqala ruble 110 ucezu ngalunye futhi ingase yehluke kuye ngesistimu esifundeni.
Izinkomba okufakiwe "Olidzhim" Kunconywa Isikali ekwakhiweni
Ngokuvamile, ithuluzi elisetshenziselwa nokuvimbela noma njengenhlangano izidakamizwa ezengeziwe ngoba impatho sikashukela. Futhi-ke asetshenziselwa ukwehlisa amazinga kashukela egazini. Umthamo Kunconywa umenzi - amaphilisi 2 kusho "Olidzhim" izikhathi 2 ngosuku. Badinga ukuthatha ngesikhathi sakusihlwa, wageza phansi ngamanzi.
Inkambo zomuthi - izinsuku ezingu-25 ngemva kubalulekile ukwenza sekhefu elifushane - izinsuku 5, ngiqale kabusha ukusetshenziswa kwezimali. Kodwa qaphela. Uma kakade kutholakala ukuthi uphethwe yini "isifo sikashukela", ukwelashwa okufanele kumele udokotela, futhi ukukhetha futhi ukwenza imali, ngisho ezibonakala engalimazi Izithako zokudla, namanje ngeke kukusize ngalutho kuso.
Izimo ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ikakhulukazi eyamukelayo yayo
Naphezu kweqiniso lokuthi izibhebhe impendulo "Olidzhim" kusukela kodokotela neziguli akhayo, kukhona iqembu labantu abangakwazi ukuthatha leli ibhekwa. Lezi zihlanganisa:
abakhulelwe kanye lactating abesifazane;
abantu ngubani nilethe yokungezwani komzimba ukuze yezingxenye ezakha izidakamizwa.
Futhi, umenzi uphawula ukuthi izibhebhe "Olidzhim" kungase (ezimweni ezingajwayelekile) kubangele ukusabela nomzimba. izindlela Overdose zalotshwa. Kodwa uma sekwenzeka, kubalulekile lavage esiswini kanye nokwelashwa okwalandela lingaze. Yiqiniso, lokhu kwenza ukuthi amakhasimende ngithi, labo abaye esetshenziswa Izithako zokudla ngoba ukwelapha nokuvimbela "Olidzhim". Izibuyekezo ngakho - emihle nemibi - thina wacosha kamuva.
Ezingaphathelana ukunikeza izindlela "Olidzhim" abathengi
Yilokho amakhasimende ukuthi isidakamizwa wasiza ukwelapha isifo sikashukela:
Okokuqala, phawula ukuthi BAA engabizi futhi ithengiswe cishe kuzo zonke ekhemisi;
ke ngempela normalizes amazinga kashukela egazini;
Kuba yisikhathi futhi lapho umkhiqizo yemvelo Lokudabuka isitshalo; iminyaka eminingi kusho zokunqanda "Olidzhim".
Ukubuyekeza, njengoba singabona, umuthi uthola ikakhulukazi omuhle. Abathengi ezisibangela abalulekile kwezimali (kodwa) wawubeka ukukala kwanga-4.8-4.9 5. nokusebenzisa izidakamizwa ikakhulukazi uqaphele ukuthi kuyasiza ukusinqanda lesi sifo ngendlela efanele usaqala, futhi uma uvunyelwe udokotela ukuba esikhundleni ongaphakeme-Bud izidakamizwa. Ngokwesiko, amaRashiya kukhona okusolisayo "wonke amakhemikhali", enika bakhethe amakhambi emvelo.
Umuthi 'Olidzhim "(Evalar): lobuya labo anisondelanga BAA kanye okutholakele kanye nesiphetho
Yiqiniso, lokho ayekusho futhi izici ezingezinhle isicelo kwaleli thuluzi:
Abaningi abakujabuleli lokho BAA okumele asetshenziswe izikhathi 2 ngosuku (kakhulu esikhathini sethu, lapho iningi amaphilisi ekhiqizwa ukusetshenziswa ngokuvumelana nesimiso "baphuza iphilisi ngosuku bese ukhohlwa ngayo");
anakho Izimo, okungukuthi, izimo komzimba ezingajwayelekile, kodwa namanje eqoshiwe;
ngaphambi ukusetshenziswa kwalo kuyadingeka ukubonana nodokotela asikisele.
Empeleni, abekho izibuyekezo okwamanje, lapho wayeyoba zisobala ukuthi luhlobo kungasizi nhlobo. Ngokuvamile abantu bethi ezinye izici ezingezinhle isicelo yayo, futhi ungabeki sohlelo elithi "ubumpofu" kusho ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, BAA "Olidzhim" ezingabizi kakhulu, plus leli phuzu cishe yonke abathengi. Ngaphezu kwalokho, omunye iphakethe kwanele uma ufuna ukuyofunda khona ngokugcwele ukwelashwa isikhathi izinsuku 25, asikho isidingo ukuthenga izindlela ezengeziwe olwengeziwe.
Noma kunjalo, uma ulandela izinga likashukela egazini, noma une yofuzo sikashukela - ababuzwayo kubazali bakho noma izihlobo, noma usuvele uye ukuxilongwa, ungase ucabangele kanye umphelelisi sikhungo ukuphathwa "Olidzhim ". Izimpendulo ngaye ikakhulukazi omuhle, odokotela futhi ningathuli Badu izici ezingezinhle. Nokho, kokubili umkhiqizi nodokotela banake yokuthi asikho isidingo ukuzithiba medicate. Ngakho uma unquma ukuthenga "Olidzhim" ngisho ukuvimbela, ngaphambi isicelo yayo namanje uyelulekwa kudokotela.
Okokuqala zosizo emkhankasweni: yini imithi ukuthatha nawe?
Harlequin Syndrome: Izimpawu, izici kanye nokwelashwa